[27 / 02 / 2020] Wadaagga Cagaaran ee Istanbul Carnet	34 Istanbul
Maalinta: 28-ka July, 2019
Wadooyinka Iskuxirka Isbitaalka Magaalada Şehit Fethi Sekin Asphalted
Agaasinka waaxda arrimaha bulshada ee degmada Elazığ ee cilmiga sayniska oo ay wehelinayaan kooxo ku xidhan wadada isku xidha Şehit Fethi Sekin City Hospital ayaa shaqo bilaabay dhagxaanta laamiga. Kooxo xiriir la leh Agaasinka Arimaha Sayniska, Şehit Fethi Sekin Şehir Hospital [More ...]
Wasiirka Turhan ayaa baaray İzmir Istanbul Highway Works
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, Istanbul-Izmir Motorway, ayaa booqday dhismaha qaybta Balıkesir ee baaritaanka. Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa booqday goobta dhismaha ee Balıkesir qeybta Motorzmir-İstanbul Motorway. [More ...]
Baahida Deg-degga ah ee Duulimaadyada Diyaaradaha Canshuuraha ee Mersin
Helikobtarka, oo ay iska leedahay Dowlada Hoose ee Magaaladda Mersin oo guud ahaan loo isticmaalo adeegyada kormeerka, ayaa shacabka loogu soo bandhigay tilmaamaha Duqa Magaalada Vahap Seçer iyada oo loo eegayo waxqabadka badbaadinta. Bilaabista inaad u shaqeyso sidii Air Taksi [More ...]
Tareenka Hejaz 101 ee Sanado kadib Sanado kadib
Bandhig ku saabsan Wadooyinka Tareenka ee Hejaz, oo sidoo kale loo yaqaanno mashruucii ugu dambeeyay ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, ayaa laga furay Jordan 101 sano kadib markii la furay wadooyinka tareenka. Wadada tareenka ee Hejaz micnaheedu waa riyo weyn oo rumowday. [More ...]
TÜVASAŞ oo leh fursad aad ganacsi ku hesho!
Kumanaan kun oo dalbanaya İŞKUR oo loogu talagalay shaqaalaha 26 ee loo qoro TÜVASAŞ ayaa marka hore geli doona bakhtiyaa-nasiibka iyadoo ay goob joog ka yihiin nootaayo dadweyne oo kaliya dadka 78 ayaa awoodi doona inay ka qeybqaataan wareysiga. Turkey baabuur Industry A.Ş. in la qaato shaqaalaha dhowr 26 [More ...]
Maraakiibta rarka ee laga soo saaro Sivas waxaa loo diri doonaa Azerbaijan
Gawaarida xamuulka ee laga sameeyo Sivas waxaa loo diri doonaa Azerbaijan. Soo-saarkii ayaa loo bilaabay nooca tareenka xNUMX gawaarida xamuulka. Haddii heshiis la gaaro, gaari xNUMX ah ayaa la soo saari doonaa. Haddii baabuurta ay soo saartay T producedDEMSAŞ ay ka gudubto imtixaannada, dakhliga 2 milyan doolar ayaa laga heli doonaa Azerbaijan. [More ...]
Maanta Taariikh: 28 Luulyo 1909 Railways Orient
Maanta taariikhda 28 Luulyo 1858 Muunad gaar ah ayaa la diyaariyey taas oo saldhig u noqon doonta heshiisyada shirkadaha doonaya inay ka dhisaan tareenka Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Shirkadda 28 Luulyo 1909 Shirkadda Ganacsiga Waddooyinka ee Orient bilaha 10 [More ...]